Belarosy, Rosia: Lavanty Fanaovana Asa Soa Anaty Aterineto Ivarotana Olona · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Catherine Lawlor
Voadika ny 12 Novambra 2018 16:59 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Български, বাংলা, bahasa Indonesia, Español, 繁體中文, 简体中文, русский
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Mey 2012)
Tsy vaovao ny fanaovana ny lavanty ho fitaovana fanangonam-bola eo amin'ny tontolon'ny fanaovana asa soa — varotana amin'ity fomba ity avokoa ny zava-drehetra miainga amin'ny sary hosodoko ka hatrany amin'ny fitsidihana miavaka. Indraindray, misy mihitsy aza ny varotra olona: atao lavanty ihany koa ny sakafo hariva miaraka amin'ireo olomalaza sy sakafo maraina miaraka aminà mpandraharaha. Warren Buffet, ohatra, nanao lavanty ny fiarahana misakafo antoandro aminy nanomboka tamin'ny 2000. Namidy tanatinà lavanty misokatra ho an'ny daholobe tao amin'ny eBay tamin'ny sarany 9.576.157.147 Ariary eo ho eo [ru] ny farany indrindra (tamin'ny 2011). Saingy tsy ny rehetra no afaka manjifa io fahafinaretana io.
Kendren'ny Ma Sense [ru], tetikasa Belarosiana iray, ny hampahafantatra ireo mpanao asa soa sokajin'olona roa vaovao izay, araka ny lalàna, tsy tena navitrika tamin'ny fanaovana asa soa: ireo tanora mpikambana anaty tambajotra sôsialy sy ireo mpankafy vohikala fitadiavana olon-tiana. Raha fintinina, fitambaranà trano fanaovana lavanty sy vohikala fitadiavana olon-tiana ny Ma Sense. Afaka tonga sy misoratra anarana ho ‘loka’ izay rehetra liana amin'izany, manolotra ny hiaraka hisotro kafe na handehandeha any amin'ny trano fijerena sarimihetsika miaraka amin'izay mpanolotra vola be indrindra. Izay rehetra tia ilay tolotra dia afaka mametraka tolo-bidy ary mividy ny ‘loka’. Tanatin'ny efa-bolana nisiany, 11.200 ireo olona nisoratra anarana tao, nahazoana maherin'ny 450.000 rubles (eo amin'ny Ariary 24.340.797 eo). Ankoatra ny fihaonana tsotra, misy ihany koa ireo fihaonana ara-barotra, sy ireo ‘loka miavaka’ kokoa (miaraka amin'ireo olomalaza sy mpandraharaha), efa hita ao anatin'ny vohikala amin'izao.
Pikasary avy ao amin'ny goodwillion.ru, 29 Mey 2012.
Lasa mpiara-miasa vaovao amin'ny GoodWillion [ru] (vohikala fanaovana lavanty fihaonana) (rohy maty) ilay fikambanna mpanao asa soa Nastenka [ru], izay manampy ireo ankizy voan'ny homamiadana tanatin'ny folo taona izao. Mirotsaka any amin'ny tahirimbola azo antoka an'i Diana Cherbadzhi sy i Andrewshi Onikienko ireo vola rehetra azo avy amin'ny fivarotana fihaonana.
Iray amin'ireo loka atao lavanty mahaliana indrindra ny avy amin'i Pasha Kiriloff, DJ iray ao amin'ny Radio Maximum izay mivarotra fihaonana amin'ny tenany sy fotoana ao amin'ny toerana fandraisampeo Radio Maximum mandritra ny fandaharany amin'ny hariva, ‘Pashkov sy i Kiriloff.’
Inona no ho azonao avy amin'izany?
Hifankahalala ny olona, hihaina fotoana mahafaly, ary hankafy ireo zavatra tsy nampoizina mahafinaritra (afaka miditra ho mpiara-miasa ihany koa ireo orinasa rehetra izay te hanome loka ho an'ireo mpandray anjara anatin'ny tetikasa) — no sady manampy ireo ankizy.
Hisy dikany ho an'ny rehetra izany!